I-Peristaltic Pump Factory -i-China Peristaltic Pump Manufacturers, abaxhasi
Isingeniso esineenkcukacha Uluhlu lokuhamba kwesalathiso: 0.0002-900ml / min inkcazo yemveliso Uyilo lwesinyithi, amaqhosha kunye nomboniso ziyilelwe nge-ergonomics ephambili nakwikona ye-30 ° ukuya kwi-oxwesileyo. Acid kunye kwealkali ukumelana, nokumelana enganyangekiyo. NgesiNgesi nangesiTshayina, isantya sonyuswe saya kwi-200 rpm kwaye i-touch screen siyalawulwa. Inokuqonda ukuhanjiswa okulula, ixesha lokulinganisa, ukupakisha okuqhubekayo, ukuvavanywa kokuhamba kunye neminye imisebenzi. Iimpawu zeTouch screen opera ...
Ireyithi yokuhamba okuphezulu: 380ml / min inkcazo yemveliso I-torque yokuphuma kwemoto inkulu, kwaye inokuqhuba iintloko ezahlukeneyo zempompo ezininzi ezinje ngothotho lwe-YZ kunye nochungechunge lwe-DG, olunokuthi lubonelele ngokuhamba kwe-0.02-380ml. I-128 × 64 ichaphaza i-matrix enkulu yescreen yolwazi lwekristale yokubonisa inokubonisa ngaxeshanye inqanaba lokuhamba kwempompo kunye nesantya sokuhamba komsebenzi wokulinganisa. Inokuqala / ukumisa, ukubheka phambili / ukubuyela umva, isantya esigcweleyo kunye neminye imisebenzi yolawulo lokusebenza. Umsebenzi ugqitywe ngeqhosha le-membrane ...
Inkcazo yemveliso Ukuqhuma-isigaba sesithathu se-asynchronous motor drive kwimigodi yamalahle phantsi komhlaba (engeyiyo eyemigodi yobuso) izinto eziqukethe imethane okanye uthuli lwamalahle, okanye imixube eqhumayo eneklasi ye-II B-class T1-T4 iigesi ezinokutsha okanye umphunga kunye nokusetyenziswa komoya kwindawo leyo izixhobo. Ibhokisi yokuhlangana ibekwe phezulu kwimoto kwaye inokuhanjiswa kumacala amane. Kufanelekile ukuba zombini irabha intambo kunye nentsimbi umbhobho kweentambo. Ibhokisi yejunction inokuxhasa iibhlokhi ezingama-3-6 ngokulandelelana, kunye ne ...
Ipharamitha yobuchwephesha, isantya: i-0.1 ukuya kwi-100 rpm, ukubuyela umva, Ukuchaneka kwesantya: i-0.1 rpm, Ukulawula isantya: Inwebu yekhiphedi cw (ukukhanya okuluhlaza) / ccw (ukukhanya kweblue) ulawulo ♢ Ukubonisa: Iimpawu ze-3 ze-LED zibonisa i-rpm yangoku, ulawulo lwangaphandle: Qalisa / yima, cw / ccw ulawulo kunye nolawulo lwesantya 0-5 V / 10 V, 4-20 mA kunye 0-10KHz, Unxibelelwano ujongano: RS485, Ukunikezelwa kwamandla: AC 220V 50/60 Hz, Ukusetyenziswa kwamandla: ≤30 W, Ukusebenza imeko: Ubushushu 0 ukuya ku-40 ℃, ukufuma Relative <80% ♢ Drive ubunzima: 2.5 kg ♢ Di ...